अंकल सामको चर्खा गीत- विचार - कान्तिपुर समाचार
अंकल सामको चर्खा गीत
फाल्गुन १५, २०७६ चन्द्रकिशोर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणले विश्वकै ध्यान तान्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रायः एकभन्दा बढी देशको यात्रामा निस्किन्छन्, तर यस पटक उनी अमेरिकाबाट सोझै गुजरातस्थित अहमदाबाद ओर्ले । त्यहाँ भव्य आयोजना गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई अभिनन्दन गरे ।
जब मोदीसँगै ट्रम्प शान्तिपूर्ण संघर्ष र सामुदायिक सामञ्जस्यका लागि महात्मा गान्धीद्वारा गरिएका कतिपय प्रयोगहरूको साक्षी सावरमती आश्रम पुगे, उनीहरूले गान्धी दृष्टिको प्रतीक ‘चर्खा’ संगै खिचाएको तस्बिरले संसारभरिकै मिडियामा ठाउँ पायो । अहिले ट्रम्प र मोदीबीच आत्मीय आकर्षण पाइन्छ । शासन प्रमुखहरूबीचको सम्बन्धले तिनका मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्छ ।
चर्खा हस्तचालित यन्त्र हो, जसबाट धागोको उत्पादन गरिन्छ । गान्धीको प्रयोगले चर्खालाई अर्थशास्त्रीय अवधारणाका रूपमा खडा गरेको छ । गान्धी चर्खालाई भुइँमान्छेको आशाको प्रतिनिधि मान्थे । सामान्यजनको स्वतन्त्रतालाई उनी चर्खाभित्र हेर्थे । गान्धी भन्थे, ‘अहिंसाको रचना कारखानाहरूको सभ्यताको जगमा हुन सक्दैन, त्यो शान्तिपूर्ण गाउंहरूको जगमा सम्भव छ ।’ चर्खा अर्थव्यवस्थाले शोषणको बहिष्कार गर्छ । शोषण नै हिंसाको सारतत्त्व हो । चर्खाले स्वावलम्बी बनाउँछ, जो स्वतन्त्रताका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा श्रमप्रतिको सम्मानलाई वैयक्तिक र सार्वजनिक जीवनमा व्यक्त गर्न चर्खा चलाउने परम्परा बसाइएको थियो । गान्धीले गर्दा नै चर्खा विचारका रूपमा समेत विकसित हुँदै आयो । रोचक पक्ष के देखियो भने, सावरमती आश्रमको आगन्तुक पुस्तिकामा ट्रम्पले महात्मा गान्धीको नामै उल्लेख गरेनन् । त्यहां उनले आफ्ना खास मित्र मोदीलाई धन्यवाद मात्र लेखे । ट्रम्पको यो सुनियोजित लेखाइको आर्थिक–राजनीतिक अर्थ छ । यस सन्दर्भमा भारतभित्र जुन व्यापकतासाथ विमर्श हुनुपर्थ्यो, ‘गोदी’ मिडियाका कारण त्यो हुन सकेन ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कतिपयले ‘अंकल साम’ वा ‘चचा साम’ ले पनि सम्बोधन गर्छन् । यसको एउटा पृष्ठभूमि छ । वास्तवमा ‘अंकल साम’ न्युयोर्कको एक व्यापारी स्यामुअल विल्सनसंग गांसिएको छ, जसलाई अंकल साम विल्सन पनि भनिन्थ्यो । स्यामुअल इमानदार, विश्वासी र देशका लागि समर्पित व्यक्ति थिए । सन् १८१२ मा अमेरिकी युद्धका बेला उनी सेनाका लागि मासु सप्लाई गर्थे, जसमाथि ‘युएस’ को मोहर लागेको हुन्थ्यो, जसले सरकारी माल भन्ने दर्साउँथ्यो । बिस्तारै–बिस्तारै अंकल साम विल्सन केवल ‘अंकल साम’ मा परिणत हुन पुगे ।
सन् १८३०–६१ मा कार्टुनिस्टहरूले ‘अंकल साम’ लाई अमेरिकी फौजको प्रतीकका रूपमा प्रशस्त प्रयोग गरे । पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा अमेरिकी सेनामा भर्तीका लागि जेम्स मोन्टगोमरी फ्ल्यागले एउटा पोस्टर बनाए, जसमा अंकल सामको तस्बिरसँंगै लेखिएको थियो, ‘आई वान्ट यु फर अमेरिकन आर्मी’ । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा समेत यस प्रकारको पोस्टरको खुब प्रयोग गरियो । यस प्रकार अंकल साम र अमेरिकी फौजबीच अटुट नाता कायम हुन गयो । दुइटै एकअर्काको पर्याय बन्दै गए ।
आफ्नो सैन्यशक्तिकै बलबुतामा अमेरिकाले पूरै विश्वमाथि हैकम चलाउँदै आएको छ । यसको सिङ्गो अर्थव्यवस्था नै हतियारको कारोबारमा टिकेको छ र अमेरिका भनौं वा अमेरिकी राष्ट्रपति यसै कारोबारलाई अगाडि बढाउन प्रयासरत रहन्छन्, जो अहिले पनि देखियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यस पटक भारतसंँग ३ अर्ब डलर बराबरको सैनिक हेलिकप्टर र उपकरण खरिद सम्झौता हुने घोषणा गरेका छन् ।
सआदत हसन मन्टोले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हतियारको सौदागरका रूपमा देखे र उनलाई अंकल साम (चचा साम) नै भनेर सम्बोधन गरे । मन्टो प्रसिद्ध दक्षिण एसियाली साहित्यकार हुन् । उनले सात दशकपूर्व चचा सामलाई सम्बोधन गर्दै पत्रहरूको लामो शृंखला लेखे । त्यसमा लेखिएका कतिपय कुरा आज पनि भविष्यवाणीझैं साबित हुँदै गएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका नाममा लेखिएका ती चिठीमा मन्टोले तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उठापटक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक–आर्थिक चालबाजीको भयानक तस्बिर कोरेका छन्, जसबाट अमेरिका कसरी फल्दै–फुल्दै गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखिएको त्यो चिठी शृंखला राजनीतिक, आर्थिक र साहित्यको बेजोड नमुना हो । अहिले मन्टो बांचेका भए यस क्षेत्रमा बढ्दो गरिबी, असमानता र साम्प्रदायिक तनावमाझ फस्टाउँदो हतियार कारोबारलाई लिएर फेरि चचा सामलाई चिठी लेख्थे ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत यात्राकै क्रममा दिल्लीमा दंगा चर्कियो । सामाजिक सञ्जालका नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा समेत त्यसको चिन्ता र चासो छचल्कियो । दुई पुराना समुदायबीचको तनावको बाछिटा दक्षिण एसियाभरि नै पर्ने गरेको छ । भारतमा दंगाको इतिहास पुरानो छ, त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । तर अहिले कसरी हुन गयो ? अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमणको मौका छोपेर भारतको आन्तरिक तनावलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न देशी–विदेशी उक्साहटमा त्यो भएको एउटा सानो वृत्त बताउँछ । तर कतिपय यसलाई समग्रतामा नियाल्नुपर्ने आग्रह राख्छन् ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानुनसँंग असहमति राख्नेहरू विभिन्न किसिमले आन्दोलन चलाउँदै थिए । यसै पृष्ठभूमिमा भारतीय सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश दीपक गुप्ताले भनेका छन्, ‘असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रका लागि आवश्यक हो । सरकार र देश दुई अलग चीज हुन् । देशको आलोचना नगरेर पनि सरकारको आलोचना गर्न सकिन्छ ।’ जस्टिसको भनाइ त्यतिखेर आएको छ, जतिखेर असहमतिको अधिकार र तरिकालाई लिएर भारतीय समाज विभाजित हुँदै छ ।
दंगालाई लिएर भारतभित्रै केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने दाबी गरिए पनि सोका लागि चाहिने नैतिक–मानसिक तयारी यसका कर्ताहरूमा भएन कि ? त्यसै गरी सरकारी संरक्षणमा गरिएको भड्काउ भाषणले एउटा पक्ष उत्तेजित भयो कि ? बहुमतको शासनले असहमत पक्षको रक्षा गर्न सकेन कि ? हिंसाको सुरुआत कसरी भयो ? के दंगाको जन्म फरक पक्षमाथिको घृणा, अफवाह र भड्काउ भाषणले हुँदैन ? दंगा हुन्छ कि गराइन्छ ? के दंगा आफैमा बजार आधारित राजनीति हो ? प्रत्यक्ष युद्धभन्दा दंगाजस्ता आन्तरिक द्वन्द्वको निर्यात अहिलेको नयां सामरिक रणनीति हो ? यी प्रश्नको जबाफको खोजीमा भारतीय राजनीति विभाजित देखिएको छ ।
दंगाले सबैभन्दा बढी सामाजिक बनोटलाई नोक्सान गर्छ । एक पटक चर्किएको मन जोड्न वर्षौं लाग्छ । उर्दुको एउटा शेर नै छ—
आग का क्या है पल दो पल में लगती है
बुझते बुझते एक जमाना लगता है ।
दंगाका कारण भुइँतहका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुन पुग्छन् । दंगापीडित वा दंगा गर्नेहरू प्रायः कमजोर आर्थिक–सामाजिक वर्गका हुन्छन्, उक्साउनेहरू जहिले पनि पछाडि हट्छन् । दंगामा सबैभन्दा बढी नोक्सान उदारवादी समूहको हुन्छ, जसले जहिले पनि मेलमिलाप र संवादको कुरा गरिरहेको हुन्छ ।
दुवैतर्फका उत्तेजित जमातले तिनको उपेक्षा गर्छन्, कतिपयले दोषी नै ठहर गर्छन् । यसका बावजुद दिल्लीमा कैयौं टोलका मध्यमार्गीहरूले सद्भाव जुलुस निकालेका छन् । उदारवादी समूहको परीक्षा यस्तै बेला हुने हो । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मानवतालाई जोगाउनैपर्छ । सामुदायिक तनाव र दूरीमा जब पक्षविशेषले राजनीतिक लाभ खोज्न थाल्छ, त्यतिखेर सबैभन्दा घोचपेच उदारवादी समूहमाथि नै हुन्छ । सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू सबैतिरका कट्टरपन्थीहरूको निसाना र चेपुवामा पर्छन् । अहिले दिल्लीमा त्यही देखिएको छ ।
भारत फेरि ती समस्याहरूको सामना गर्दै छ, जोसँग महात्मा गान्धी जीवनपर्यन्त जुझिरहे । कुनै पनि लोकतन्त्र असहिष्णुताले चल्न सक्दैन । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वबाटै लोकतन्त्रले सञ्जीवनी पाउँछ । गणतन्त्र र सभ्य समाजको मूल पहिचान यही हो । यसको पहिलो प्रत्याभूति सरकारी पक्षले दिन सक्नुपर्छ । के गान्धीलाई बिर्सेर भारत आफ्ना चुनौतीहरूबाट जोगिन सक्छ ? धार्मिक कट्टरवाद, अन्धराष्ट्रवाद र उपभोक्तावादले चारैतिर संकट निम्त्याउँदै छ ।
भय, अविश्वास र अनिश्चितताको माहोलमा भारतको लोकतन्त्र र समाजले स्थिरता पाउन सक्दैन । चचा सामको आफ्नै चर्खा गीत छ, जसको गायनमा लोभिइरहे भारत मौलिक परम्परा र पहिचानबाट पछाडि पर्दै जाने निश्चित छ । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:२५
फाल्गुन ८, २०७६ चन्द्रकिशोर
हामी संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । कुनै पनि संविधानलाई देशको एउटा दस्तावेज मान्नु काफी छैन । किनभने संविधान त्यो मात्र होइन, जो यसको मूलपाठमा लेखिएको हुन्छ । संविधान त राज्यका अंगहरूद्वारा आत्मसात् गरिएका अभ्यास र अर्थहरूको समष्टि हो ।
त्यसैले त कतिपय संविधानविद् भन्ने गर्छन्— संविधानको अर्थ तथा सार त्यसलाई लागू गर्ने सरकार र तिनका अगुवा, त्यसलाई लागू गर्ने तरिका, देशको न्यायालयद्वारा दिइने व्याख्या तथा समय–समयमा विकसित हुने परम्परामा प्रतिध्वनित हुन्छ । संविधानले आफ्नो राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाहरूका लागि शासन व्यवस्थाको आधारभूत ढांँचा निर्माण गर्छ भनिए पनि मुलुकभित्रको विद्यमान शक्ति संरचनाकै कारण वास्तवमा संविधानका शब्दहरूले अर्थ र अस्तित्व पाउने गर्छन् ।
संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष बितिसके । भनिन्छ, प्रत्येक संविधानले यसका निर्माताहरूका संकल्पना र मूल्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । अहिले प्रश्न उठ्दै छ, के अहिलेको संवैधानिक संरचना यसका निर्माताहरूको मानसमा थियो ? संविधान जनताका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यता, तिनका आकांक्षामा आधारित हुन्छ भनिन्छ । त्यसो भए संविधानप्रति भुइँतहका कैयौं कोणबाट असहमतिको कोलाहल किन गुन्जियो ? कतिपय अवस्थामा संविधान सामाजिक परिवर्तनको साधन हुन्छ । त्यस्तोमा संविधानले आत्मवरण गरेको मूल्य यसले विरासतमा पाएको सामाजिक मूल्यभन्दा फरक हुन्छ ।
संविधान आफ्ना नागरिकका लागि अहिंसाको व्याकरण हो, तर यो संविधान हिंसाको जगबाट अछूतो छैन । अहिले चालु संविधानलाई लिएर कैयौं अतिवाद परिदृश्यमा छन् । एकातिर यस्ता व्यक्ति छन्, जो बहुमतका आधारमा संविधानका अक्षरहरूमा आफ्नो अभिप्राय कुँद्न उद्यत देखिन्छन् । अर्कातिर ती छन्, जो संविधानमा अन्तर्निहित जनपक्षीय उपलब्धि र अस्तित्वलाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्छन् । निर्वाचित शासकहरूले के बिर्सने गरेका छन् भने, न निरंकुश न त नियन्त्रित साध्य नै हो संविधान । यो त जीवन्त र गतिशील साधन हो, जो जनदबाब वा जनआकांक्षाहरूद्वारा समयसापेक्ष हुन उत्प्रेरित भैरहन्छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्नेहरू विमर्श–विमुखतामा तत्पर छन् । उता संशोधनवादीहरूले के चाहेका हुन्, प्रस्ट छैन । यस्तो रिक्तताका माझ विभिन्न सामुदायिक परकम्प अस्तित्वमा आउँदै छन् ।
अहिले कैयौं अतिवाद जुरमुराउँदै छन् । भूराजनीतिक अतिवादका बाछिटाहरू पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा प्रकाशित एउटा चित्रलाई निहुँ बनाई जसरी चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रिया बाहिर आयो, त्यसले स्वतन्त्रताका पक्षधर आम नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ । यो यस्तो समयमा हुँदै छ, जतिखेर संविधानलाई ऐन–कानुनमार्फत प्वाल पार्ने र त्यसमा स्वतन्त्रतालाई जाक्ने नेपाल सरकारको बदनियत उजागर हुँदै छ । समृद्धिको काल्पनिकीमा निर्देशित लोकतन्त्र वा सामाजिक अनुशासनको खोजी सरकारको मूल ध्येय बनेको छ । आफ्नो भूमिका तन्काउने दाउमा रहेको उत्तरी खेलाडी यहाँको समाजलाई एक वा अर्को बहानामा विभाजित गर्ने उपायको खोजी गरिरहन्छ । अहिलेको प्रतिक्रिया यस्तै विचारग्रन्थिको उपज हो ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफैमा कैयौं अतिवादको जननी हो । संविधानले लोकतन्त्रलाई आफ्नो प्राणवायु मानेको छ । प्रस्तावनामै लेखिएको छ— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने... । बहुदलीय प्रणालीमा अनेक दल र विचारधारा हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएको सत्तारूढ नेकपा डबल जब कम्युनिस्ट शक्ति र सत्ताको कुरा गर्न थाल्छ, तब त्यसमा अतिवादको गन्ध आउन थाल्छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अति क्रान्तिकारिताले छिमेकीहरूलाई हाम्रा चोटाकोठामा चियाउने मौका दिने गर्छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प छ र त्यो हो— लोकतन्त्र । सन् १९२७ मै जोन डेभीले भनेका थिए— लोकतन्त्रमा लाग्ने रोगको उपचार अर्को केही छैन; बढी, अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हो । जनतामा जति बढी अधिकार निहित हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उन्नत र सुदृढ हुन्छ । देशसामु समृद्धि र सामाजिक अनुशासनको संकथन पस्केर संविधानभित्रबाट मजबुत जनताका ठाउँमा मजबुत सरकार र कमजोर जनता बनाउने उपक्रम आफैमा अतिवाद हो । एउटा अतिवादले अर्को अतिवादका लागि हौस्याउँछ । पद्धतिमा देखिएका अपर्याप्तता तथा पद्धतिभित्रैबाट परिमार्जनका अवसरमाथि आलटाल गर्नु वा औंल्याउन खोज्नेलाई आक्षेप लगाउनु पनि अतिवाद हो । पद्धतिबाहिर विकल्प खोज्ने प्रयास अहिलेको अवस्थामा अतिवादको अर्को अनुहार हो । पात्र र निहुँ फरक भए पनि अतिवादको उपस्थिति निरन्तर छ । इतिहास साक्षी छ, नेपालमा मध्यमार्गको दाहिने कुनो दक्षिणपन्थ बलियो हुँदा देब्रे कुनो उग्रवामपन्थ अझ उग्र हुँदै जान्छ । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा मध्यमार्गको संकुचनले कालान्तरमा सामाजिक–राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गर्छ । यो भनेको जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक दक्षिणपन्थीहरूका लागि अवसर हो ।
सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने टिप्पणीहरू समाज नियाल्ने ऐनाजस्तै हुन् । यसमा सामाजिक र धार्मिक सवालमा असहिष्णुता नेपाली समाजमा भित्रिँदै गएको सूचना र संकेत भेटिन्छ । केही पहिलासम्म धार्मिक सवालमा मुखर असहिष्णुता देखिँदैनथ्यो । मानिसहरू हच्किन्थे । बरु राजनीतिक–सामाजिक विषयहरूमा अर्का पक्षमाथि तीखा टिप्पणी गर्ने, तिनको माध्यमप्रति कडा र कठोर दृष्टिकोण राख्ने गरिएको थियो । धार्मिक मतका आधारमा राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने अतिवादी सोचले नेपाली मानसलाई संक्रमित गर्दै गएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हामी जति ‘कनेक्टेड’ छौं, उति नै ‘अनरिलेटेड’ पनि । हतारमा टिप्पणी गर्ने, कुण्ठा पोख्ने, रिस व्यक्त गर्ने वा चर्चा पाउने लोभले हामीलाई सोचविचार गर्ने ठाउँमा ‘राइट टु इन्सल्ट’ दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अतिवादको एउटा सशक्त मञ्च बन्दै गएको छ । यो दक्षिणी बाछिटा हो । अतिवाद त्यो अवस्था हो, जुन प्रत्येक प्रतिकूल विमर्शलाई नियन्त्रण गर्ने र सबैलाई आफ्नो सर्तमा अनुशासित गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छ । लोकतन्त्र त अतिवादका अनेक आयामलाई नियमित गर्ने एक तरिका मानिएको छ, तर अचेल यो मानौं निरंकुशताको छाता हुन पुगेको छ । संवादको उदार ‘स्पेस’ मार्ने चाहना सत्ताले गरोस् वा समाजभित्रबाटै उब्जियोस्, त्यो अतिवादको बीउ हो ।
अतिवाद मूल रूपमा सामाजिक स्तरमा पनि देखिन्छ । ‘सामाजिक’ शब्दलाई यहाँनिर केलाउन जरुरी छ । सामाजिक सत्ताको गहिरो सम्बन्ध समाजको सांस्कृतिक–धार्मिक पक्षसँग हुन्छ । कतिपयले धार्मिक समाजलाई समाज होइन, जातिहरूको समूह भन्छन् । जातहरूबीच श्रेणीक्रम छ । अचेल पुरानो जातिवाद नयाँ रूपमा नयाँ सत्ताको खोजीमा छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको फैलिँदो आकर्षण र सरकारी संरक्षणले सामाजिक बनोटमै हेरफेर गरिदिएको छ । यो आर्थिक अतिवाद हो । नेपालमा व्याप्त हुँदै आएको आर्थिक अतिवाद ठूलो र अभेद्य देखिन थालेको छ ।
अतिवादको मूलस्रोत संवादमा अविश्वास हो । यसले अरूलाई मान्यता दिँदैन । यस शब्दको प्रयोग राजनीतिक र धार्मिक विषयमा यस्तो विचारधाराका लागि हुन्छ, जो मुख्यधारा वा समाजमा स्वीकार्य हुँदैन । नेपालमा अतिवादको इतिहास कति लामो छ, उत्तर सहज छैन । कुनै पनि दीर्घजीवी समाजमा एकै पटक अनेक प्रवृत्ति समानान्तर वा फरक–फरक चरणमा अस्तित्वमा आउँछन् । कुनै बखत एउटै परम्परामा समावेशी र अतिवादको तत्त्व भेटिन्छ । यहाँ जातपातको जडता र परस्परतालाई अतिवाद र समावेशीको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अतिवादका बीच सामञ्जस्य नेपाली समाजको मूल प्रवृत्ति हो । नेपाली लोकतन्त्रमा किन गतिरोध आउँछ वा विराम लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँनिर भेटिन्छ । नेपाली लोकतन्त्रले मध्यमार्गलाई छाड्नु हुन्न । अतिवादलाई समाजबाट लखेट्न नागरिक अधिकारको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अहिंसाप्रति जनमानस सचेत रहनुपर्छ । आत्मविश्वासयुक्त लोकतान्त्रिक समाजले नै अतिवाद के हो वा होइन भनी खुला विमर्श गर्छ । सहिष्णुता र संवादमुखी परम्पराहरूको पुनरुत्पादनले नै सरकारी वा संकीर्ण वृत्तको अतिवादको आगोबाट जोगिन सकिन्छ । संवादका रैथाने संस्कृतिलाई ब्युँताएर नै नेपाली समाज र लोकतन्त्र उज्यालोतर्फ बढ्न सक्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:११
सरकार, कोरोना र अख्तियार
अस्पतालहरूले बिर्सेको पेसागत दायित्व
विश्‍व व्यवस्थामा चीन र कोरोना
पृथ्वीको बेचबिखनले ब्युँतिएको महामारी
कोरोनासँग जुध्‍न खोज्दा भ्रष्टाचारका फेला !
जता पायो उतै नथुकौं
कोभिड- १९ [अपडेट]
संयुक्त राज्य अमेरिका २७७८२८ ७१४१ ९८२३
इटाली ११९८२७ १४६८१ १९७५८
स्पेन ११९१९९ १११९८ ३०५१३
जर्मनी ८५०६३ १२७५ २४५७५
चीन ८२५११ ३३२६ ७६७६०
हाल १,०९८,८४८ ५८,८७१ २२६,१०६
भाइरस : सजीव कि निर्जीव ?
रामचन्द्र अधिकारी चैत्र २२, २०७६
मानव जगत्मा भाइरस (विषाणु) ले विभिन्न कालखण्डमा आतंक मच्चाउँदै आएको छ । जति पनि विश्वव्यापी महामारी (प्यान्डेमिक) फैलिए, अधिकांशको कारक भाइरस नै भएका छन् ।...
यदि म प्रधानमन्त्री भए...
राधा पौडेल चैत्र २२, २०७६
मोबाइलको सानो झ्यालबाट विश्व हेरिसकेपछि र सुनिसकेपछि सानो काठको झ्यालबाट काठमाडौं हेर्न मन लाग्छ । केही महिनाअघि मात्र अस्ट्रेलियामा लागेको आगोको मुस्लो जस्तो पेट हुँडल्दै...
बीपी डायरी लकडाउनमा
अभि सुवेदी चैत्र २२, २०७६
केही छानिएका व्यक्ति र तिनका कर्मबारे लेख्तै जाने विचार गरें । उडी यालनको फ्यान्टासी कमेडी ‘मिडनाइट इन प्यारिस’ (सन् २०११) भन्‍ने फिल्ममा जस्तो आँखाअगाडि अनेकौं...
कार्टुनमा भाइरस र भ्रष्टाचार
अबिन श्रेष्ठ चैत्र २१, २०७६
कोभिड– १९ । कुनै गोप्य मिसनको नामजस्तो लाग्ने यो शब्द यतिखेर संसारमा सबैभन्दा धेरै चलेका शब्दमध्ये पर्छ । कोरोना, भाइरस, महामारी, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन ।...
सुदर्शन आचार्य चैत्र २१, २०७६
कोभिड–१९ नामक महामारीले विश्वलाई नै स्तब्ध बनाएको छ । यही समय कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका नाममा कतै सकारात्मक त कतै नकारात्मक समाचार बाहिर आउन थालेका...
परदेशीको डायरी : रफ्तारको जिन्दगीमा ब्रेक लाग्दा‍...
महेशकुमार खाती चैत्र २१, २०७६
सधैं हतारहतार कुदिरहने मान्छेको दैनिकीमा टक्क ब्रेक लागेको छ। न कहिल्यै बन्द हड्ताल हन्थ्यो, न कहिल्यै बिजुली जान्थ्यो । न त रोकिन्थ्यो कसैको काम ।...
टिप्पणी : सामान खरिदमा जंगी अड्डा, के मनसायले निर्णय भयो ?
कृष्ण ज्ञवाली चैत्र २१, २०७६
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहका सञ्चालकसँग उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुको गठबन्धन, खरिदमा भ्रष्टाचारका समाचार सार्वजनिक भएर त्यसको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद सम्झौता रद्द...
सम्पादकीय चैत्र २१, २०७६
पछिल्लो समय कोरोनाको आशंकामा अस्पतालहरूले अरू समस्या भएका बिरामीलाई पनि उपचार गर्न नमान्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो निकै घातक छ ।
लक्ष्मी लम्साल चैत्र २०, २०७६
वुहानमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) भाइरसलाई करिब करिब नियन्त्रणमा लिइसकेपछि चीन यतिखेर एकैचोटि दुई हात चलाइरहेको छ– एउटा हातले थला परेको घरेलु मामिला पुनर्बहाली गर्न...
राम गुरुङ चैत्र २१, २०७६
इम्पेरियल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई मार्च २६, २०२० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— यदि बेलैमा नियन्त्रण नभए कोरोनाको महामारीले विश्वका ७ अर्ब मानिसलाई...